ကန် ဒုသမ္မတနဲ့ဇနီး အများပြည်သူရှေ့မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအထိုးခံ( ဒီဇင်ဘာလ၊၁၈၊၂၀၂၀)
အမေရိကန် ဒုသမ္မတ Mike Pence နဲ့ ဒုသမ္မတကတော် Karen Pence တို့ဟာ သောကြာနေ့က သမ္မတအိမ်ဖြူ ဘေးက အုပ်ချုပ်ရေးရုံး အဆောက်အဦးထဲမှာ Covid 19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ကြပြီး ဒီဆေးဟာ စိတ်ချရပြီး ထိရောက်မှု ရှိတာကို ပြည်သူသိအောင် ပြသခဲ့ပါတယ်။
အခုလို သမိုင်းတွင်မယ့် ဒီသီတင်းပတ်ကုန်မှာ စုဝေးပြီး ကျနော်တို့အတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိလာနေပြီဆိုတာကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေကို ပြသနိုင်ပါပြီ။ ဒီစိတ်ချရပြီး ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက် ထုတ်နိုင်ပြီဆိုတာကို ကျနော်နဲ့ ဇနီး Karen တို့က လက်တွေ့ပြသနိုင်တဲ့အတွက် သိပ်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ နေ့ပါပဲ လို့ ဒုသမတ Pence က ပြောသွားတာပါ။
Walter Reed စစ်ဆေးရုံက အမှုထမ်းတွေက ဒုသမ္မတနဲ့ဇနီးကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး တဆက်ထည်းမှာပဲ အမေရိကန် လူထုကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုဌာန အကြီးအကဲ Surgeon General Jerome Adams လည်း ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ ၂ ကြိမ်ထိုးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပြီး နောက် ၂၁ ရက်အကြာမှာ ဒုတိယတလုံးထပ်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အရွေးကောက်ခံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒင် ကတော့ သူဟာ လာမယ့် သီတင်းပတ်ထဲမှာ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့လုပ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း.NBC သတင်းဌာနကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Pfizer BioNTech ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့ covid 19 ကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ တလွှားက ဆေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ သက်ကြီးစောင့်ရှောက်ရေးဌာနတွေက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက် ပထမအသုတ် ဖြန့်ဖြူးခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အခုလို ဒုသမ္မတ က ပြည်သူတွေ ယုံကြည်မှု ရှိလာစေဖို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြသခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။.
နောက်ဆေးကုမ္ပဏီတခု ဖြစ်တဲ့ Moderna ထုတ်ကာကွယ်ဆေးကိုတော့ ကြာသပတေးနေ့မှာပဲ FDA အကြံပေးအဖွဲ့က အရေးပေါ်အသုံးပြုဖို့ အတည်ပြုပေးခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဒီရောဂါနဲ့ သေဆုံးရသူ ၃ သိန်းကျော်နေပြီး အကူးစက်ခံရသူက ၁၆.၃ သန်း ရှိနေတယ်လို့ Johns Hopkins တက္ကသိုလ် စစ်တမ်းမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။
အမရေိကနျ ဒုသမ်မတ Mike Pence နဲ့ ဒုသမ်မတကတျော Karen Pence တို့ဟာ သောကွာနကေ့ သမ်မတအိမျဖွူ ဘေးက အုပျခြုပျရေးရုံး အဆောကျအဦးထဲမှာ Covid 19 ကာကှယျဆေးထိုးခဲ့ကွပွီး ဒီဆေးဟာ စိတျခရြပွီး ထိရောကျမှု ရှိတာကို ပွညျသူသိအောငျ ပွသခဲ့ပါတယျ။
အခုလို သမိုငျးတှငျမယျ့ ဒီသီတငျးပတျကုနျမှာ စုဝေးပွီး ကနြျောတို့အတှကျ မေြျှာလငျ့ခကျြတှေ ရှိလာနပွေီဆိုတာကို အမရေိကနျပွညျသူတှကေို ပွသနိုငျပါပွီ။ ဒီစိတျခရြပွီး ထိရောကျမှုရှိတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေးကို အမရေိကနျပွညျသူတှအေတှကျ ထုတျနိုငျပွီဆိုတာကို ကနြျောနဲ့ ဇနီး Karen တို့က လကျတှပွေ့သနိုငျတဲ့အတှကျ သိပျကို စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ နပေ့ါပဲ လို့ ဒုသမတ Pence က ပွောသှားတာပါ။
Walter Reed စဈဆေးရုံက အမှုထမျးတှကေ ဒုသမ်မတနဲ့ဇနီးကို ကာကှယျဆေးထိုးပေးခဲ့တာဖွဈပွီး တဆကျထညျးမှာပဲ အမရေိကနျ လူထုကနျြးမာရေး ဝနျဆောငျမှုဌာန အကွီးအကဲ Surgeon General Jerome Adams လညျး ကာကှယျဆေးထိုးခဲ့ပါတယျ။ ဒီကာကှယျဆေးဟာ ၂ ကွိမျထိုးဖို့လိုအပျတာဖွဈပွီး နောကျ ၂၁ ရကျအကွာမှာ ဒုတိယတလုံးထပျထိုးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အရှေးကောကျခံ သမ်မတ ဂြိုးဘိုငျဒငျ ကတော့ သူဟာ လာမယျ့ သီတငျးပတျထဲမှာ ကာကှယျဆေးထိုးဖို့လုပျမှာ ဖွဈကွောငျး.NBC သတငျးဌာနကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Pfizer BioNTech ကုမ်ပဏီတို့ရဲ့ covid 19 ကာကှယျဆေးကို အမရေိကနျနိုငျငံ တလှားက ဆေးဝနျထမျးတှနေဲ့ သကျကွီးစောငျ့ရှောကျရေးဌာနတှကေ သကျကွီးရှယျအိုတှအေတှကျ ပထမအသုတျ ဖွနျ့ဖွူးခဲ့ပွီး ရကျပိုငျးအတှငျးမှာပဲ အခုလို ဒုသမ်မတ က ပွညျသူတှေ ယုံကွညျမှု ရှိလာစဖေို့ ကာကှယျဆေးထိုးပွီးပွသခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။.
နောကျဆေးကုမ်ပဏီတခု ဖွဈတဲ့ Moderna ထုတျကာကှယျဆေးကိုတော့ ကွာသပတေးနမှေ့ာပဲ FDA အကွံပေးအဖှဲ့က အရေးပျေါအသုံးပွုဖို့ အတညျပွုပေးခဲ့တာပါ။ အမရေိကနျနိုငျငံမှာ ဒီရောဂါနဲ့ သဆေုံးရသူ ၃ သိနျးကြျောနပွေီး အကူးစကျခံရသူက ၁၆.၃ သနျး ရှိနတေယျလို့ Johns Hopkins တက်ကသိုလျ စဈတမျးမှာ ဖျေါပွပါတယျ။
အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်တချို့ရဲ့ Valentine’s Day အမှတ်တရ
ဒုသမ္မတ Mike Pence ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်း Joe Biden အပေါ် ဝေဖန်ထိုးနှက်